किन एकै दिन २२ सयले महँगियो सुन ? :: Setopati
किन एकै दिन २२ सयले महँगियो सुन ?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, फागुन २१
बुधबार सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेको छ।
यसले नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च मूल्य कायम भएको छ। यस दिन सुनको मूल्य प्रतितोला ८० हजार ५ सय पुगेको छ। यसअघि फागुन १२ गते सुनको मूल्यले प्रतितोला ८० हजार ३ सयमा पुगेर नयाँ कीर्तिमानि बनाएको थियो।
आखिर किन बढ्यो सुनको मूल्य
यस दिन सुनको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले व्याजदर घटाउनु हो। मंगलबार बैंकले ०. ५ प्रतिशत व्याजदर घटाएको छ। जसअनुसार नयाँ व्याजदर १. २५ प्रतिशत कायम भएको छ। मंगलबारअघि १. ७५ प्रतिशत थियो।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले व्याजदर घटाउँदा सुनप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण ह्वात्तै बढ्न गयो। एकातिर कोरोना भाइरसले चीनलगायत विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न थालेको छ। जसले गर्दा फेब्रुअरी पहिलो सातादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मागसँगै मूल्य पनि बढिरहेको थियो।
यहीबीचमा अमेरिकी व्याजदर घट्नुले सुनको मागमा झनै वृद्धि भएको र मूल्य बढेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट।
‘एकातिर कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने, अर्कोतिर अमेरिकी व्याजदर घट्दा सुनको माग बढ्नु स्वभाविक हो, यसले मूल्यलाई असर पार्‍यो’ उनले भने। अमेरिकी व्याजदर घट्दा लगानीकर्ताले सुनतिर लगानी सार्ने गर्छन्। यसले सुनको माग बढ्न जान्छ।
डिसेम्बर महिनामा देखा परेको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहँदा फेबु्रअरी पहिलो साताबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तरजसो उकालो लागिरहेको छ। फेब्रुअरी ४ मा प्रतिऔंस १५१२ अमेरिकी डलर रहेको सुनको मूल्य आज बुधबार १६३६ डलर पुगेको छ।
के अझै बढ्ला त मूल्य ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मागले मूल्य निर्धारण हुने भएकाले ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउँछन् नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य।
कतिपयले सुनको मूल्य १ लाख पुग्ने भन्दै हल्ला गर्ने गरेको बताउँदै शाक्यले हल्लाको पछि लाग्न नहुने बताउँछन्। जस्तोसुकै विज्ञले पनि सुनको मूल्य ठ्याक्कै भन्न नसक्ने र कसैले भनेको मिलेमा संयोग मात्रै हुने उनको भनाई छ।
तर मंगलबार मात्रै अमेरिकी फेडले व्याज घटाएकाले केही दिन सुनको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान छ। यदी कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दै गएमा वा नियन्त्रण हुन नसकेमा भने सुनको मूल्य अझ बढ्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २१, २०७६, ०३:४१:००